Laser Kucheka kweA Ndege Kapeti yeiyo Aviation Maindasitiri - Wuhan Golden Laser Co., Ltd.
Laser Kucheka kweA Ndege Kapeti yeiyo Aviation Maindasitiri
Laser tekinoroji inowanzoshandiswa mukubhururuka uye mumunda weaerospace, senge laser kucheka uye kuchera kwejet zvikamu, laser welding, laser cladding uye 3D laser kucheka. Kune akasiyana marudzi e laser michina yeakadai maitiro, eg yakakwira simba CO2 laser uye fiber laser yezvinhu zvakasiyana. Goldenlaser inopa yakagadziriswa laser yekucheka mhinduro yendege kapeti.
Iyo yechinyakare yekucheka nzira yendege kapeti ndeyemagetsi kucheka. Iine zvipingaidzo zvakakura kwazvo. Iyo yekucheka pamucheto yakashata kwazvo uye zviri nyore kutsemuka. Iyo yekutevera inodawo kuti iwe pachako uteme pamupendero uye wozosona iyo kumucheto, uye iyo yekumashure-kugadzirisa maitiro akaomarara.
Pamusoro pezvo, iyo kapeti yekuvhiya yakanyanya kureba. Laser nokuveza ndiyo nzira iri nyore yekucheka kapeti yendege nemazvo uye nemazvo. Laser inonamira pamucheto wemagumbeze enhandare otomatiki, hapana chikonzero chekusona, chinokwanisa kucheka saizi yakakura kwazvo nemhando yepamusoro, kunze kwebasa uye nekuchinjika kwakanyanya kwezvibvumirano zvidiki nepakati.
Yakaiswa Carpet Zvishandiso Inokodzera Laser Kucheka
Zvinhu zvenaironi, Non-dzakarukwa, Polypropylene, Polyester, Blended jira, Eva, Leatherette, etc.
Kukosha Kukosha kweLaser Kucheka kweAviation Blanket
Sunga pamucheto wekapeti otomatiki, hapana chikonzero chekusona zvakare.
Conveyor tafura mberi zvinhu kuti nokuveza tafura kwaita, hapana chikonzero Chinyorwa kupindira panguva nokuveza, kuchengetedza basa vashandi.
Yakakwira chaiyo yekucheka kwemhando refu mapatani.
Inoenderana mashandiro emakapeti ayo akakodzera laser kucheka nekumaka
Nharaunda Rugs, Indoor Carpet, Kunze Carpet, Doormat, Car Mat, Carpet Inlaying, Yoga Mat, Marine Mat, Ndege Kapeti, Floor Kapeti, Logo Kapeti, Ndege Cover, EVA Mat, nezvimwe.
Laser Machine Kurumbidza
X-Yakareba Tafura Laser Kutema Muchina
Iyo yekucheka tafura upamhi ndeye 2.1 metres, uye iyo tafura kureba inopfuura 11 metres kureba. Neiyo X-Yakareba Tafura, iwe unogona kutema akanakisa marefu mapatani nepfuti imwe, hapana chikonzero chekucheka hafu yemapatani uye wozogadzirisa zvimwe zvese zvinhu. Nekudaro, hapana musiyano wekusona pane icho chidimbu chemuchina chinogadzirwa nemuchina uyu. Iyo X-Yakareba Tafura Dhizaini Dhiza inogadzira izvo zvekushandisa chaizvo uye nemazvo nenguva diki yekudyisa.
Zvimwe zvigadzirwa zvechigadzirwa